सोधिने प्रश्न - किंगदाओ Renergy उपकरण कं, लिमिटेड
एक हावा टरबाइन बिजुली कसरी बनाउँछ?
हावा राउन्ड घाँसका पातहरू उत्तेजित गर्दछ; यो एक बिजुली जडान जो शाफ्ट, spins। एक बिजुली यांत्रिक ऊर्जा देखि बिजुली ऊर्जा उत्पादन गर्छ।
म हावा टरबाइन को के आकार चाहिन्छ?
यो तपाईंको ऊर्जा माग मा निर्भर गर्दछ। कृपया आफ्नो अधिकतम बिजुली खपत प्रति दिन गणना। औसत मा, एक विशिष्ट अमेरिकी घर 5kw वा 10kw कल संग सानो कल आवश्यक थियो।
औसत payback अवधि के हो?
को payback अवधिको लम्बाइ कल, स्थापना साइट मा हावा गुणस्तर, व्याप्त बिजुली दर र उपलब्ध वित्त र प्रोत्साहन मा निर्भर गर्दछ। यी र अन्य कारक आधारमा, समय यसलाई पूर्णतया देखि630 वर्ष कहीं लाग्न सक्छ एउटा सानो हावा कल को लागत ठीक लाग्छ।
सानो हावा प्रणाली कसरी कायम छन्?
नियमित निरीक्षण एक कल गरेको 20 + -year आयु हरेक केही वर्ष एक पटक प्रदर्शन गर्दै छन्। केही टर्बाइन एक घर कम्प्युटरबाट टाढैबाट अनुगमन गर्न सकिन्छ यद्यपि एउटा व्यावसायिक स्थापना वा प्रशिक्षित टेक्नीसियन (सामान्यतया निर्माता वा बिक्रेता को कल बेचिएको कि), भौतिक निरीक्षण मार्फत कल र टावर राख्छ।
म अनुमति योजना चाहिन्छ?
सानो हावा ऊर्जा प्रतिष्ठानहरु योजना अनुमति आवश्यक हुन सक्छ र तपाईं सधैं स्थानीय अधिकार परामर्श गर्नुपर्छ। समग्रमा, राष्ट्रिय योजना नीतिहरू सानो मात्रा हावा ऊर्जा विकास समर्थन।
पवन टर्बाइन हल्ला हो?
हाम्रो सानो पवन टर्बाइन भइरहेको प्रत्यक्ष ड्राइव प्रणाली गियर बक्स हल्ला नगर्न र दक्षता वृद्धि गर्न द्वारा धेरै, शान्त उदाहरणका लागि हुन डिजाइन गरिएको छ। सामान्य मा, हावा नै एक हावा टरबाइन भन्दा बढी हल्ला बनाउँछ। यो सानो पवन टर्बाइन कुनै पनि हल्ला 30 भन्दा बढी मि सुने गरिने सबै भन्दा असम्भाव्य छ। यो हल्ला क्षेत्र वरिपरि 40-50 dB मा छ (एक)।
7.What प्रकारको समर्थन तपाईं-साइट स्थापनाका लागि प्रदान गर्न सक्छन्?
स्थापना गर्नु अघि, हामी सबै प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछौं। यसैबीच हामी स्थापना निरीक्षण गर्न टेक्नीसियन पठाउन सक्नुहुन्छ।
8.How म व्यावहारिक प्रणाली चयन गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको परियोजना सार्वजनिक ग्रिड नेटवर्क देखि टाढा छ भने, त्यसपछि तपाईं बन्द ग्रिड सिस्टम विचार गर्न सक्छौं।
तपाईं बस बिजुली दर घटाउन आशा भने, त्यसपछि तपाईं ग्रिड सिस्टम मा विचार गर्न सक्छौं।
तिनीहरूलाई बाहेक, हामी माइक्रो ग्रिड / दूरसंचार स्टेशन प्रदान गर्न र विभिन्न अवस्थामा अनुसार सौर संकर प्रणाली हावा गर्न सक्नुहुन्छ।
9.Maybe म सिर्फ ब्लेड, पलटनेवाला, र टावर जस्तै केही घटक खरीद गर्न सक्नुहुन्छ?
हो तिमि सक्छौ। कुनै पनि सम्बन्धित परियोजना, हाम्रो साथ शेयर स्वागत गर्दछौं।
उत्पादन बाहेक अरू के गर्न सक्छ?
हामी डिजाइन, विश्लेषण, गणना, स्थापना र सेवाको लागि जिम्मेवार गर्न सक्छन्।